‘पारस’ छाडेका वाग्लेले ‘हिमानी’ निर्देशन गर्ने, लिड रोलमा स्वस्तिमाको सम्भावना कति ? – Nepal Press
‘पारस’ छाडेका वाग्लेले ‘हिमानी’ निर्देशन गर्ने, लिड रोलमा स्वस्तिमाको सम्भावना कति ?
२०७७ माघ ६ गते १३:३१
काठमाडौं । ‘लुट’ फेम्ड निर्माता एवं निर्देशक माधव वाग्लेले फिल्म ‘हिमानी’ निर्माणको घोषणा गरेका छन् । गतसाता पूर्वनिर्धारित फिल्म ‘पारस’लाई स्थगन गरेका वाग्लेले रोमान्टिक लभस्टोरी फिल्म निर्देशन गर्न लागेको बताएका हुन् ।
नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै वाग्लेले चैतदेखि फिल्म छायांकन सुरु हुने बताए । आउँदो महिनादेखि मुख्य कलाकारका लागि अडिसन सुरु हुँदैछ । गतसाता चलचित्र विकास बोर्डमा उनले ‘हिमानी’ टाइटल दर्ता भएको र निश्चल बस्नेत, स्वस्तिमा खड््का लगायतलाई औपचारिकताको लागि कलाकारको रुपमा उल्लेख गरेका छन् ।
लिड रोलमा स्वस्तिमा हुने सम्भावनालाई उनले अस्वीकार गरे । ‘अडिसनबाटै सबै कलाकार तय हुनेछन्’ उनले भने । डेढ करोड बजेटमा बन्ने फिल्मको पटकथा स्वयम वाग्लेले लेखेका हुन् । पोखरा, काठमाडौं र चितवनमा फिल्म सुट हुनेछ ।
फिल्मको निर्देशन पनि स्वयमले गर्नेछन् । गतसाता भुवन केसीसँग मिलेर गर्ने भनिएको फिल्म पारसबाट उनले हात झिकेका थिए ।
तर, यो फिल्म चाहिँ पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहबारे आधारित नहुने वाग्लेले प्रष्ट पारे । ‘कुनै व्यक्तिमाथि फिल्म आधारित हुनेछैन’ उनले भने, ‘यो काल्पनिक कथावस्तु हो ।’ फिल्मलाई चाहिँ वाग्लेले होमप्रोडक्सन प्रिन्सेस मूभिजको ब्यानरमा बनाउनेछन् ।
प्रकाशित: २०७७ माघ ६ गते १३:३१